Semalt's Page Speed ​​Analyzer သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အတွက်ကုစားနည်းဖြစ်သည်
Semalt's Page Speed ​​Analyzer ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၂။ ဘာကြောင့် Page Load Speed ​​Speed?
၃။ Live ဥပမာဖြင့် Semalt's Page Speed ​​Analyzer ကိုနားလည်ခြင်း
၄။ Load Speed ​​မြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ယနေ့တွင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ကံကြမ္မာသည်၎င်းသည်မည်မျှမြန်မြန်တင်သည်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ ၀ န်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်း၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ရန်ဤအချက်များကိုလေ့လာပါ။
မြန်ဆန်စွာတင်နေသောစာမျက်နှာများသည် visitors ည့်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ရုံသာမကအချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်နွှယ်နေသည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အချိန်ပိုသုံးစွဲခြင်းသည်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုဖြစ်စေသည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာတစ်ခုက၎င်း၏သက်ရောက်မှုကိုသက်ရောက်စေသောအချိန် bounce မှုနှုန်း။ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုနိမ့်ကျသောနှုန်းနိမ့်ကျသည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှုန်းရှိသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည် (ဂရုမစိုက်ပါ) ကိုဂူဂဲလ်မှနားလည်သည် ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
ယခုအားဖြင့်သင်သည်စာမျက်နှာ၏အမြန်နှုန်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းအရိပ်အမြွက်တစ်ခုရနိုင်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ load speed သည် SEO ကိုသာမက User ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်တွင်လည်းသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သည်သင်၏စာမျက်နှာအားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များအားလုံးအပေါ်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသောကြောင့်အရေးကြီးသောအမှားများကိုထောက်ပြ။ ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုမပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Semalt's Page Speed ​​Analyzer ဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုသင်ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင်ထိုကဲ့သို့သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
စာမျက်နှာမြန်နှုန်း Analyzer မှ Semalt ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချိန်သည် Google ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ ၀ န်ဆောင်မှုအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအမှားများကိုလည်းခွဲခြားသိမြင်စေပြီး၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ရန်အကြံပြုသည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖွင့်ချိန်သည်၎င်း၏အောင်မြင်မှု (သို့) ပျက်ကွက်မှုတွင်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောကဏ္playမှပါ ၀ င်နိုင်သောကြောင့်ကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်ဤအခမဲ့ရယူသုံးစွဲနိုင်ပုံကိုကြည့်ကြပါစို့ စာမျက်နှာမြန်နှုန်း Analyzer ရုံသုံးခြေလှမ်းများအတွက်။
အဆင့် ၁: သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ရိုက်ပါ semalt.net လိပ်စာဘား၌တည်၏။ Semalt's ၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည် သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အားကောင်းသော SEO ကိရိယာများ။
အဆင့် ၂: cursor ကို window ၏ဘယ်ဘက်သို့ရွှေ့ပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ စာမျက်နှာအမြန်နှုန်း။
အဆင့် ၃: The စာမျက်နှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိရိယာ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုဆိုလျှင်သင်၏ဆိုဒ်၏ URL ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ စစ်ဆေးပါ ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ခလုတ်ကို။
ဘာကြောင့် Page Load Speed ​​Speed?
မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် desktop စက်များပေါ်တွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်သောလူတိုင်းအတွက်စာမျက်နှာ၏အမြန်နှုန်းသည်အရေးကြီးသည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုချက်ချင်းဖွင့်သောအခါသုံးစွဲသူများစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိသည်။ အခြားအကြောင်းပြချက်အချို့မှာ -
အသုံးပြုသူများကိုစိတ်ရှုပ်စေသည် - နှေးကွေးသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာသည်အသုံးပြုသူများကိုစိတ်ပျက်စေပြီးစိတ်ပျက်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အများစုသည်ထိုဆိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြောဆိုခြင်းမပြုပါ။
ကူးပြောင်းမှုနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါလူအနည်းငယ်ကသာအဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးပြောင်းလာကြတာပေါ့။ ပိုနှေးနှေးသောစာမျက်နှာသည်၎င်းတို့အများစုကိုသင့် site ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အခြားအရာများမပေါ်ပေါက်မီကပင်ထွက်ခွာစေသည်။
တုံမှုနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု - Bounce Rate သည်ရာခိုင်နှုန်းပုံစံဖြင့်ဖော်ပြသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်ဘာမျှမလုပ်ဘဲဘယ်လောက်မြန်မြန်ထွက်ခွာသည်ကိုပြသသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှေးကွေးခြင်းကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာသည့်မြင့်တက်သောနှုန်းသည်မျက်နှာသာမရပေ။
မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများကိုမောင်းနှင်သည် - မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်တင်ရန်အချိန်ယူရသောနှေးကွေးသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာသည်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏမောင်းနှင်စေသည်။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွက်တော့လုံးဝမကောင်းပါဘူး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူ ဦး ရေသည်အဆက်မပြတ်တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုဖွင့်လှစ်သောသုံးစွဲသူများသည် desktop မှတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုအသုံးပြုသူများထက်သာလွန်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ဝက် (ဘ်) စာမျက်နှာတစ်ခုလျင်မြန်စွာတင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အခြားအကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်၊ သို့သော်ယခုသူတို့ကိုမဆွေးနွေးကြပါစို့။ သင်မှတ်မိရမည့်အချက်တစ်ခုမှာစာမျက်နှာ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးအသုံးဝင်မှသာအရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ မရှိပါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်လိုချင်သောရလဒ်များမရရှိနိုင်ပါ။
Live Example ဖြင့် Semalt ၏ Page Speed ​​Analyzer ကိုနားလည်ခြင်း
Semalt ၏ Page Speed ​​Analyzer ကိုလက်တွေ့ဥပမာတစ်ခုဖြင့်နားလည်ကြပါစို့။ ကျနော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားကြသည်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ် mywindows10.com။
ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် စာမျက်နှာမြန်နှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝက်ဘ်ဆိုက်၏ URL ကိုထည့်ပြီး Check ကိုနှိပ်ပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တစ်မိနစ်တောင်မပြည့်သေးပါ။
mywindows10.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်အရမ်းမြန်တဲ့ page loading speed ရှိတယ်။ ဤအရာလေးခုကိုအစီရင်ခံစာမှသင်တွေ့လိမ့်မည် Semalt ၏စာမျက်နှာမြန်နှုန်း Analyzer :
အကျဉ်းချုပ် ၀ င်းဒိုး (Desktop ပေါ်တွင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများသာမကရမှတ်များနှင့်အတူ)
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ Load emulation
၁။ အကျဉ်းချုပ် ၀ င်းဒိုး
အကျဉ်းချုပ် ၀ င်းဒိုးသည်စုစုပေါင်းရမှတ် (desktop နှင့် mobile ပေါ်တွင်) ကိုပြပြီးရမှတ်သည်ကောင်းမွန်သော၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာမျက်နှာတင်ချိန်၊ အောင်မြင်သောစာရင်းစစ်ဆေးမှုစုစုပေါင်းနှင့်အမှားအယွင်းများမည်မျှရှိသင့်ကြောင်းကိုလည်းပြလိမ့်မည်။
သင့်ဝဘ်ဆိုက်၏ရမှတ်သည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုနားလည်ရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၉၀-၁၀၀ ရမှတ်သည်ကောင်းမွန်သောမြန်နှုန်းကိုပြသပြီး ၀ မှ ၄၉ အထိရမှတ်သည်အလွန်နိမ့်ကျသောမြန်နှုန်းကိုဆိုလိုသည်။
ဒီလေ့လာသုံးသပ်သူရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကသူကရမှတ်များနေလျှင်တောင်အမှားအယွင်းများကိုအတိအကျထောက်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အပေါ်ကဥပမာမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းရမှတ် ၉၈ နဲ့ ၉၆ ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Desktop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၁၁ ခုနဲ့မိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှား ၁၃ ခုရှိသေးတယ်ဆိုတာပြနေတုန်းပဲ။
ဤအပိုင်းသည်သင့်အားအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကိုချက်ချင်းတောင်းဆိုရန်နှင့်အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာကို PDF format ဖြင့်အခမဲ့ download ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအခန်းတွင် desktop/mobile browser တွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတုခိုးခြင်းဖြင့်ရရှိသောမက်ထရစ် (၆) ခုပါ ၀ င်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏မည်မျှအသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်းပြသရန်နှင့်ဂူဂဲလ် SERP ပရိုမိုးရှင်းအတွက်မည်မျှကောင်းသည်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံး CPU ကိုပျင်းရိအချိန်
အများဆုံးအလားအလာပထမ ဦး ဆုံး input ကိုနှောင့်နှေးအချိန်
အဘို့ mywindows10.comဤအပိုင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
သင်သတိပြုမိပါကမက်ထရစ်တိုင်းတွင်အချိတ်အဆက်တစ်ခုပါရှိသည် (ပိုမိုလေ့လာပါ) ။ သင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါကမက်ထရစ်နှင့်ပတ်သက်သောအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များပါ ၀ င်သောစာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုပေါ်လာမည်။
ဤအခန်းတွင် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ ၀ န်ဆောင်မှုမြန်နှုန်းကိုထိခိုက်စေသောအမှားများပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက်များလည်းရှိသည်။ သင်သည်သူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်ပါကသင်၏စာမျက်နှာသည်မြန်ဆန်စွာ ၀ င်ရောက်ပြီး visitors ည့်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
ရုပ်ပုံများတင်ရန်အချိန်၊ ပုံစံများ၊ အရွယ်အစားများ၊ သင့်ဆိုဒ်မှမတူညီသောအရာများနှင့်အခြားအရာများစွာနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြံပြုချက်များကိုသင်ရရှိပါလိမ့်မည်။ အဘို့ mywindows10.comဤအပိုင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
သင်သတိထားမိပါကအကြံပြုချက်တိုင်း၏ညာဘက်တွင် dropdown arrow ရှိသည်။ ၎င်းကိုသင်နှိပ်သောအခါ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ထပ်အချက်အလက်များပေါ်လာလိမ့်မည်။ အကြံပြုချက်တိုင်းတွင်သင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ကူညီရန်နောက်ဆုံးတွင်အချိတ်အဆက်တစ်ခု (ပိုမိုလေ့လာရန်) ရှိသည်။
ဤကဏ္ section သည်သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သင့်လျော်သောစာရင်းစစ်ရလဒ်များကိုပြသည်။ သင်ပိုမိုကူညီရန် dropdown menu နှင့် "Learn more" link များသည်ယခင်ကဏ္inများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Load Speed ​​ကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
အောက်ပါအချက်များကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လျှင်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်/ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏အမြန်နှုန်းသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ပုံများကိုအကောင်းဆုံး ပုံများနှင့်ပြနာများသည်ဆိုဒ်အများစု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆိုးရွားစေသည်။ သင့် site ပေါ်တွင်ပုံများပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားပြီးအရွယ်အစားသေးငယ်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင်အကောင်းဆုံးပုံစံသည် WEBP ဖြစ်သည်။ ပုံများပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရာတွင်အရည်အသွေးကိုလည်းစိတ်ထဲထားပါ။
စာမျက်နှာအရွယ်အစားကိုလျှော့ချပါ ကြီးမားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည်၎င်းကိုတင်ရန်အချိန်ပိုကြာမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အသုံးမပြုတဲ့ scripts များကိုချုံ့ခြင်း၊
ယာယီသိမ်းဆည်းခြင်းကိုအသုံးပြုပါ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်များသည်၎င်းတို့ကို ထပ်မံ၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးသောဖိုင်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်ကူညီသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်လျှင် cache ကိုအသုံးပြုပါ။
CDN (Content Delivery Network) ကိုအသုံးပြုပါ။ CDN သည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခု၏အကြောင်းအရာကိုနေရာများစွာတွင်သိုလှောင်ထားသည်။ CDN ၏ cache server များသည်များသောအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့်နီးသောကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် page speed ကိုတိုးတက်စေသည်။ သင် CDN (Content Delivery Network) ကိုအသုံးပြုနေသလား။
တစ်ခုခုဝယ်ယူခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုရယူခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသောသတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာအများစုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေကြတယ်။ ဤအခြေအနေသည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုအလျင်အမြန်ဖွင့်တင်ခြင်းကိုလိုအပ်စေသည်။
သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ/ဝက်ဘ်ဆိုက်၏မြန်နှုန်းကိုပုံမှန်ဆန်းစစ်ရုံတင်မကအသုံးပြုသူများကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေသောအကြောင်းအရာများပါ ၀ င်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမည်သို့မြန်ဆန်အောင်လုပ်ရမည်ကိုသင်နားမလည်ပါကသို့မဟုတ်သူတို့၏အမြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်လိုလျှင်သင်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Semalt။